कोरोना नियन्त्रणको नाममा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको बारा काँग्रेसको आरोप
बारा । नेपाली कांग्रेसले बाराले जिल्लाका केही स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणको नाममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । जितपुर सिमरा उपमहानगर लगायतका स्थानीय तहले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च
काँग्रेस शीर्ष नेताहरुको बैठक आज बस्दैं
काठमाडौं । नेपालीका काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुको बैठक आज बस्दैछ । पार्टीभित्र देखिएको विवाद हल गर्न नेताहरुले छलफल गर्न लागेका हुन् । पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी र केही केन्द्रीय सदस्य सहभागी हुने
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक आज, संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दवाव दिने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठक आज बस्दैछ । बैठकका संसद अधिवेशन बोलाउनेबारे छलफल हुने बताइएको छ । सरकारले तत्काल संसद अधिवेशन नबोलाए काँग्रेसको अगुवाइमा अधिवेशनका लागि समावेदन गरिने सहमहामन्त्री
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीले राख्नुभएका मागहरु जायज भएको भन्दै ऐक्वद्धता जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माले डा. केसीको मागहरुमा समर्थन जनाउँदै कांग्रेसले औपचारिक रुपमा विज्ञप्ती जारी
नागपुजे पहिरोपीडित ८४ घर परिवारलाई काँग्रेसको राहत
सिन्धुपाल्चोक । नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्य समिति तथा काँग्रेस र यसमा आबद्ध भातृसंस्थाका नेताहरुले नागपुजे पहिरो पीडितलाई खाद्यान्न्लगायत राहत वितरण गरेका छन् । बाह्रबिसे नगरपालिका ७ नागपुजे, भीरर्खक र विकगाउँका
उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइ रथ यात्रालाई निरन्तरता दिन काँग्रेसको अपिल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले रातो मछिन्द्रनाथको रथ यात्रालाई निरन्तरता दिन अपिल गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता बालकृष्ण खाँणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी भौतिक दुरी कायमका
वीपी प्रतिष्ठानमा विरोध प्रर्दशन
सुनसरी, साउन २८ । सुनसरीको धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विरोध प्रर्दशन भएको छ । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द गरेर काठमाडौं गएपछि बुधबार
३८ औं बीपि स्मृति दिवस मनाइदैं, विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम
काठमाडौं । नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बीपि)को ३८ औं स्मृति दिवस आज मनाइँदैछ । बीपि स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाली काँग्रेस र उसका भातृ